Allgedo.com » 2012 » January » 25
Home » Archive Daily January 25th, 2012 Guddiga Doorashada Road-map-ka oo la sheegay in dhawaan la shaacin doono (Sir la helay) Jan 25, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Warar hoose oo aan ka helnay aqalka madaxtooyada dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa waxuu sheegayaa in dhawaan shaaca laga qaadi doono Guddiga Dorashada Road-map-ka oo sida la sheegay ka kooban 15 xubnood.
Guddigaan oo sida caadada ah beelaha Soomaaliyeed loogu qeybin doono saamiga 4.5 ayaa waxaa la sheegayaa in ay beesha Daarood qeyb u heli doonto 3 xubnood oo ka wada... Maydad Soomaali Ah Oo Ku Soo Caaryey Xeebaha Dalka Liibiya Labadii Maalmood Ee La Soo Dhaafay. Jan 25, 2012 Ka dib markii maalmihi la soo dhaafay xeebaha u dhexeya wadamada Libya iyo Talyaaniga lagu la’aa dooni ay saarnayeen muhaajiriin soomaali ah oo tiradooda lagu sheegey 56 ruux waxaa labadii maalmood ee la soo dhaafay xeebaha dalka Liibya laga helay maydad Soomaaliyeed oo la sheegey inay doonidaasi saarnayeen.
Xeebaha gobollada dalka Libya ayaa la xaqiijinayaan in laga helay maydad soomaaliyeed... Beledxaawo: Qarax Miino oo lala Eegtay Gaadiid ay Wateen Ciidamada Dowladda Jan 25, 2012 Beledxaawo, Somalia (AOL) – Qarax nooca miinooyinka dhulka lagu aaso ah ayaa lala eegtay gaadiid ay wateen ciidamada dowladda KMG ee kusugan magaalada Beledxawo ee gobolka Gedo.
Qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa la sheegay in uu gaariga ka qabsaday qeybta danbe, iyadoona la sheegay in uu dhaawacyo kasoo gaaray shan kamid ah askartii gaariga saarnayd.
Goobjoogeyaal ku sugan magaalada Beledxaawo... Xildhibaan Maxamuud Sayid Aden oo ka hadlay howlgalkooda ciidan ee gobolka Gedo, isla markaana wax lagu qoslo ku tilmaamay maamul goboleedyada dibadaha looga dhawaaqo (Dhageyso wareysiga xildhibaanka) Jan 25, 2012 Xildhibaan Maxamuud Sayid Aden oo maanta warbixin dhinacyo badan taabaneyso siiyay shabakadda AOL ayaa sheegay sababta dib u dhaca howl-galkooda ciidan ee gobolka Gedo u keentay ay tahay dowladda KMG ah oo ka gaabisay dhanka Loojistikada ciidanka. “Dagaalku ma sahlano waxuuna u baahan yahay tayo ciidan, tiro ciidan, Loojistik iyo qalab. Marka nasiib daro dowladda KMG ah ee Muqdisho mas’uuliyiinteeda... Somalia at Crossroads: Somali Foreign Intervention, Humanitarian Crisis and Aspirations for Statehood (Read the Conference flyer) Jan 25, 2012 Somalia at Crossroads: Foreign Intervention, Humanitarian Crisis and Aspirations for Statehood
The Ohio State University- Columbus, Ohio January 27-28, 2012, 9:00AM-5:00PM Hagerty Hall, 1775 College Rd (Friday Morning and all day Saturday)
Denney Hall 164 W 17th Avenue (Friday Afternoon Breakout Sessions) Can you attend this event? Respond Here
For additional... Shan Qof oo lagu Dilay Howgallo laga Sameeyay Beledweyne Jan 25, 2012 Beledweyne, Somalia (AOL) – Howgallo ballaaran oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Itoobiya oo maalintii labaad kasocdo magaalada Beledweyne ayaa lagu soo waramayaa in ciidamadu ay ku dileen ilaa shan qof oo ay ku eedeeyeen in ay ku lug lahaayeen qaraxii laga fuliyay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sarkaal lagu magacaabo Col. Isaaq Cali C/dulle oo lahadlay... Ciidamada Mareykanka oo Xoog ku Soo Furtay Shaqaale Ajnabi ah oo Afduub loo Heystay Jan 25, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Ciidamada Mareykanka ayaa soo furtay laba kamid ah shaqaalo ajaanib ah oo ay heysteen kooxo burcad badeed ah kuwaasoo dhawaan laga soo afduubtay degmada Gaalkacyo, in mudo ahna ku jiray gacanta burcad badeeda.
Howgalka lagu soo furtay shaqaalahani ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Farcaano oo u dhexeeya Degmada Gelinsoor iyo Cadaado, iyadoona ay howlgalka fuliyeen... Bam Gacmeed lagu Tuuray Masjid ku Yaalla Muqdisho Jan 25, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Qarax nooca bambooyinka gacanta laga tuuro ah ayaa la sheegay in xalay lagu tuuray masjid ku yaal xaafadda Abagado ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir.
Bamka ayaa la sheegay in lagu tuuray masjidka xilli masaajidka lagu tukanayay salaadda cisha, waxaana ku dhaawacantay ilaa shan qof oo ah dadkii masaajidka ku jiray.
Bamka ayaa la sheegay in uu tuuray qof durbadiiba... Madaxweeynaha Soomaaliya oo Ugu Baaqay Dowladaha Caalamka in ay Muqdisho Dib uga Furtaan Safaaradahooda Jan 25, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Madaxweeynaha dowladda KMG ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay dowladaha Caalamanka in ay dib uga furtaan magaalada Muqdisho safaaradihii ay ku lahaayeen Soomaaliya.
Madaxweeynaha oo shalay ka hadlayay xafladii lagu furayay xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho, ayaa ugu baaqay dowladaha caalamka in ay magaalada Muqdisho dib... Radio Allgedo/ Waraysiyo